Fitaovana fanamafisana socket PPR
Masinina fanamafisana socket Digtel PPR
Masinina fanamafisana socket Manual
Masinina fanamafisana bokotra manual
Mpanapaka ambony arched
Masinina fanodinana bokotra mandeha ho azy CNC
Masinina mandeha amin'ny laoniny mandeha ho azy
Masinina Fusion feno lasely tanteraka
Milina Butt Fusion Machine
Masinina manapaka amin'ny zoro marobe
Torohevitra momba ny famelabelarana THERMOPLASTICS
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-10-12
Ny welding dia ny dingan'ny fampiraisana ireo sehatra amin'ny alàlan'ny fanalefahana azy ireo amin'ny hafanana. Rehefa mihombo thermoplastics, ny iray amin'ireo singa fototra dia ny fitaovana. Raha mbola manodidina ny plastika ny olona dia mbola maro ny olona no tsy mahatakatra ny fotony, izay manakiana ny las tsara. Ny isa amin'ny ...
Mety amin'ny fampiasa rano azo sotroina ve ny fantsom-pe?
Ny rafitry ny fantsona polyethylene dia ampiasain'ny mpanjifantsika amin'ny famatsian-drano fisotro hatramin'ny nanombohany tamin'ny taona 1950. Ny indostrian'ny plastika dia nandray andraikitra lehibe tamin'ny fiantohana fa ny vokatra ampiasaina dia tsy hisy fiatraikany ratsy amin'ny kalitaon'ny rano. Ny isan-karazany ny fitsapana natao tamin'ny fantsom-p ...
Ny toetra amam-panahy mahatonga ny fantsona HDPE mety amin'ny vahaolana amin'ny famatsian-drano
Ny fantsom-piaramanidina HDPE dia manana toetra maromaro izay mahatonga azy io ho fitaovana kandidà tsara amin'ny fitaterana rano. Manomboka amin'ny fandevenana mivantana, mankany amin'ny fantsom-pantsaka misy fantsona misy hatrany amin'ny fandavahana torolàlana, ny tanjaka iombonan'ny fantsom-bokatra HDPE sy ny fikojakojana maharitra dia mety tsara amin'ny fametrahana te ...
Ny welding dia ny dingana fampiraisana ny surf ...
Mety amin'ny paompin-drano azo sotroina ve ny fantsom-pe ...
Ny rafitra fantsona polyethylene dia efa ...